Afsluitdijk, ပင်လယ်ထဲက ဆည်တစ်စင်း - Myanmar Water Portal
Afsluitdijk, ပင်လယ်ထဲက ဆည်တစ်စင်း
Afsluitdijk, ပင်လယ်ထဲက ဆည်တစ်စင်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဆည်နှင့်ရေကာတာ အရေအတွက်သည် ဆက်လက်တိုးပွားလျက် ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ရေချိုစီးဆင်းသည့် ဧရိယာများကို လှိုင်းမြင့်များမှ ကာကွယ်မှုပေးသည့်အပြင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း ကြောင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာကာ ကမ်းရိုးတန်းဒေသကို ရေလွှမ်းမိုးမည့် ဘေးမှလည်း ကာကွယ်ပေးသည်။ သို့သော် ပင်လယ်အတွင်း တည်ဆောက်ထားသော ဆည်နှင့် ရေကာတာများသည် အဏ္ဏဝါမျိုးစိတ်များ၏ သဘာဝအလျောက် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေသည်။
ဤပြဿနာကို နယ်သာလန်ရှိ Afsluitdijk တွင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသလား။
Afsluitdijk သည် ကီလိုမီတာ ၃၀၀ ကျော်ရှည်လျားသော ကမ်းရိုးတန်းကို မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်းပိတ်၍ တည်ဆောက်ထားသော ၃၂ ကီလိုမီတာ အရှည်ရှိသည့် ရေကာတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤရေကာတာသည် ကမ်းရိုးတန်းဒေသကို ကောင်းစွာအကာအကွယ် ပေးသော်လည်း ဒေသအတွင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သော ငါးမျိုးစိတ်များစွာအတွက်မူ မကျော်လွှားနိုင်သော အတားအဆီးတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါးများသည် ဆားငံရေမှ ရေချိုသို့လည်းကောင်း၊ သူတို့၏ မွေးရာပါနေရာ ဆီသို့လည်းကောင်း အပြန်အလှန်ရေကူးမသွားနိုင်တော့ပါ။
သို့သော် ဒတ်ခ်ျလူမျိုးများက ဤရွှေ့ပြောင်းနေသော ငါးများအတွက် လိမ္မာပါးနပ်သော အဖြေတစ်ခု ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ရေကာတာထဲတွင် တွင်းပေါက်တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ပြီး ပတ်ပတ်လည်တွင် ဒီရေ မြစ်တစ်စင်းကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုမြစ်ကို Afsluitdijk Fish Migration River (FMR) ငါးများရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နိုင်ရန် အတွက် တည်ဆောက်ထားသော Afsluitdijk မြစ်ဟု အမည် တွင်လိုက်သည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် မူလက ပင်လယ်အောက်တွင် ရှိခဲ့သော်လည်း ရေကာတာများ တည်ဆောက်၍ ပင်လယ်မှခွဲ ထုတ်ထားသော မြေနိမ့်နေရာများ (polders)၊ ရေဒလက်များ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ နှင့် Afsluitdijk တို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာတွင် ကျော်ကြားသည်။ ယခုကာလတွင်မူ ငါးများ လှည့်လည်သွားလာ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် Afsluitdijk ကို ဖောက်၍ တည်ဆောက်ထားသော ဒီရေမြစ်သည် အာရုံအစိုက်ခံရဆုံး ဖြစ်နေသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများက Afsluitdijk ရှိ ငါးများ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်နိုင်စေရန်အတွက် ဆောက်ထားသောမြစ် သည် ကမ္ဘာ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများ ကြုံတွေ့နေရသည့်‌ အဓိက စိန်ခေါ်မှုများအတွက် အရေးပါသော အဖြေတစ်ခုဖြစ်သည် ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။
ယခင်က ဘေးအန္တရာယ်ကင်း၍ အရည်အသွေး မြင့်မားသော ရေရရှိနိုင်ရေးသည် အဓိက စိုးရိမ်မှုဖြစ်ခဲ့သော်လည်း လက်ရှိတွင်မူ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော နည်းပညာများကို ထည့်သွင်းတည်ဆောက်နိုင်ရေးသည် လူသားများ၊ သစ်ပင်ပန်းမာန်များနှင့် သတ္တဝါများအတွက် ပိုမိုအကျိုးရှိသောကြောင့် ပို၍အလေးပေးလာကြသည်။ သဘာဝကို ဆန့်ကျင် ပြောင်းလဲ တည်ဆောက်မည့်အစား သဘာဝနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဆောက်လုပ်ခြင်းကို ပိုမိုဆောင်ရွက် လာကြသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ၂၀ရာစု ၏ ရေစီမံခန့်ခွဲမှု သည် ကမ်းရိုးတန်းများကို တိုသွားစေမည့် ရေလှောင်တမံများ တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ကာ ၂၁ ရာစုတွင်မူ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုမိုအလေးပေးအာရုံစိုက်ရန် ပင်ဖြစ်သည်။
နက်ရှိုင်းသော ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်အောက် (Far below sea level)
ဟိုချီမင်းစီးတီးနှင့် နယူးအော်လင်း စသောမြို့ကြီးများမှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဟိုက်ဒ‌‌ရောလစ် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ကို လေ့လာရန် အတွက် နယ်သာလန်သို့ လစဉ်လတိုင်းလာရောက်ကြသည်။
လာရောက်လေ့လာသူများသည် ဟိချ်မြို့တွင် ရှိသော နိုင်ငံရေးစင်တာ နှင့် မြို့တော် အမ်စတာဒမ် အပါအဝင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ တစ်ဝက်နီပါးသည် ပက်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် မယုံနိုင်ဖွယ်ရာ နိမ့်သည်ကို သိရှိပြီးမှ လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရောလစ် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သော နယ်သာလန်သည် ရာစုနှစ်များစွာကတည်းကစ၍ ရေကို ကောင်းစွာထိရောက်သော၊ တီထွင်ဆန်းသစ်သော နည်းလမ်းများ ဖြင့် ထိန်းကျောင်း အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါတွေအားလုံးရဲ့ အစသည် 'terpen' ဟုခေါ်သော နေထိုင်၍ ရသော လူလုပ်ကုန်းမြင့်မြေများနှင့် ရေထိန်း တာတမံများကို ရေထဲတွင် မြေနေရာရရှိရန်အတွက် သဟဇာတဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါးများ ကူးလူးသွားလာနိုင်ရန် အတွက် တည်ဆောက်ထား‌‌သော ဒီရေမြစ် သည် ကောင်းမွန်သော ဥပမာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများစွာအတွက် Afsluitdijk သည် ပင်လယ်ကိုအောင်မြင်စွာ ပိုင်းခြားနိုင်ပြီး ကုန်းမြေတိုးချဲ့ရေး နှင့် ရေလုံခြုံမှု ပိုမိုရရှိနိုင်ရေးကို ဖန်တီးရန် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသော ဥပမာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သို့သော် Afsluitdijk တွင်လည်း အားနည်းချက် ဆိုးကျိုးတစ်ခုရှိသည်။ ၁၉၃၂ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးကျန်သော တာတမံအပိုင်းကို လက်စသတ် ပိတ်လိုက်သောအခါ IJsselmeer ခေါ် ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဆည်သည် Noord-Holland နှင့် Friesland ပြည်နယ်များကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားလျက် တချိန်တည်းမှာပင် Wadden ပင်လယ် နှင့်ရေချိုအိုင် ISselmeer တို့ကို ပိုင်းခြားပေးထားသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ရေငန်နှင့် ရေချိုနှစ်မျိုးလုံးအပေါ် မှီခိုရင်း ပြောင်းရွှေ့သွားလာနေသော ငါးမျိုးစိတ်များသည် ၎င်းတို့၏ အသုံးပြုနေကျ လမ်းကြောင်းများမှ တစ်ဆင့် သွားလာ၍ မျိုးဥချရန်၊ ရာသီအလိုက် လှည့်လည်နေထိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ ရလဒ်မှာ ငါးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု အကြီးအကျယ် ကျဆင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဂေဟစနစ် ပြန်လည်ချိတ်ဆက် တည်ဆောက်ခြင်း (Restoring ecological contact)
တစ်ချိန်က အဆင်ပြေ ထိပ်တန်းရောက်ခဲ့သော အကျိုးများခဲ့သည့် လုပ်ရပ်တွေမှာလည်း ဆိုးကျိုး‌‌တွေရှိတတ်ပါသည်။ UNESCO ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင်နေရာဖြစ်သည့် Wadden ပင်လယ်ကို ကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်သည့် Waddenvereniging (Wadden အသင်း) ဥက္ကဌ Arjan Berkhuysen က "ဒီဖြစ်ရပ်မှ ကျွန်တော်တို့ သင်ခန်းစာရပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ လုပ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကို ဆက်လုပ်သွားမှာပါ" လို့ ပြောခဲ့ပြီးနောက် နောင်အနှစ်ငါးဆယ်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင်Afsluitdijk ကို ရာသီဥတုဒဏ်ကို ခံနိုင်‌စေမည့် အကြီးစား ပြန်လည် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်း ဖြစ်‌‌သော ငါးများပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်နိုင်မည့် ဒီရေမြစ်ဖန်တီးခြင်းလုပ်ငန်းကို ချက်ချင်းစတင်ခဲ့သည်။
ထိုအယူအဆသည် Afsluitdijk မှာ တွင်းတစ်ပေါက် ဖောက်မယ်ဆိုတာနဲ့ စတင်ခဲ့ခြင်းပါ။ "ပင်လယ်ကိုပိုင်းခြား ထားတဲ့ ဒီတာတမံကြီးမှာ အမြဲတမ်း ပွင့်လျက်ရှိနေမယ့် အပေါက်တစ်ပေါက် ရှိနေခြင်းအားဖြင့် ငါးရှဥ့်၊ ပင်လယ်ရေချိုငါးနှင့် ဆယ်လ်မွန်ငါးများကဲ့သို့သော ရေချို၊ ရေငံ နှစ်မျိုးကျက်စားသည့် မျိုးစိတ်များအတွက်ဘဝသံသရာလည်ရန်၊ မျိုးပွားရန်နှင့် ကြီးထွားရန်အတွက် ကောင်းမွန်သည်"ဟု Berkhuysen ကပြောပါတယ်။ "ဤနည်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဖက်တွင် Wadden ပင်လယ်နှင့် မြောက်ပင်လယ်ကြား ယခင်ကရှိခဲ့သော ဂေဟစနစ် ချိတ်ဆက်မှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ပြီး၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူIjsselmeer နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဥရောပက ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ထားသော သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေဖြစ်သည့် Rhine ရေစီးဆင်းရာ ဒေသကိုပါ တစ်ချိန်တည်း ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့သည်"ဟု Berkhuysen က Fryslân ပြည်နယ်ရှိ ဒေသခံအာဏာပိုင်များကို တင်ပြခဲ့သည်။
"၂၁ ရာစုရေစီမံခန့် ခွဲမှု - သဘာဝ၊ လူသားနှင့် စီးပွားရေးကို ပါးနပ်စွာချိတ်ဆက်ခြင်း "
ငါးများရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရန် တည်ဆောက်ထားသော ဒီရေမြစ်သည် လေးကီလိုမီတာကျော် ရှည်ပြီး Afsluitdijk ရှိ အပေါက်တစ်ပေါက်ကို ဖြတ်၍ အမြဲတမ်းစီးဆင်းနေသည်။ လေးကီလိုမီတာသည် မြစ်ထဲတွင် ငါးများ ဆားငန်ရေမှ ရေချိုသို့တဖြည်းဖြည်း ကူးသန်းသွားလာနိုင်စေရန် သေချာစဉ်းစား တည်ဆောက်ထားသော မြစ်အရှည်ဖြစ်သည်။ ဒီရေကျချိန်တွင် IJsselmeer မှ Wadden ပင်လယ်သို့ ရေချိုစီးဆင်းပြီး ဒီရေတက်လာသောအခါ ပြောင်းပြန်ပြန်စီးသည်။
ငါးများသည် ရေစီး နှင့်အတူ လိုက်ပါလာပြီး ကန်ထဲသို့ သက်‌တောင့်သက်သာ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ရေချိုမှ ရသောအနံ့ မှတစ်ဆင့် ရေချို‌ရေစီး‌ကြောင်းများ (lure current) ကို သိရှိသောကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေးအတွက် တည်ဆောက်ထားသော မြစ်၏ဝင်ပေါက်ကို ရှာဖွေရန် ငါးများအတွက် ပြဿနာမရှိပါ။ ရေစီးကြောင်းများကို ထိန်းချုပ်ထားလျက်ရှိပြီး ပြင်းထန်သော မုန်တိုင်းများဖြစ်‌ပါက စနစ်ကို ပိတ်လိုက်နိုင်ပါသည်။ ဤစီမံကိန်းသည် IJsselmeer တွင် ရေချိုရရှိမှုနှင့် လူသားတို့၏ လုံခြုံမှု နှစ်ခုလုံးအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
ဤလူလုပ်မြစ်ကို Afsluitdijk ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးကျွန်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သော Kornwerderzand အနီးတွင်ရှိသည့် ထွက်ပေါက်ကွန်ရက် တွင် တည်ဆောက်လိမ့်မည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လတွင် Afsluitdijk Wadden ဧည့်စင်တာကို ဤနေရာတွင် ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ ဧည့်စင်တာတွင် နယ်သာလန် နှင့် ပြည်ပမှ ဧည့်သည်များသည် Wadden ပင်လယ် IJsselmeer၊ နှင့် Afsluitdijk တို့၏ သမိုင်းကြောင်းများ နှင့် ငါးများရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်း အကြောင်းတို့ကို စိတ်ဝင်တစား သိရှိလေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဧည့်သည်များ အနေဖြင့်လည်း ငါးများ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနိုင်ရန် တည်ဆောက်ထားသော မြစ်ကို လမ်းလျှောက်၍လည်းကောင်း လှေဖြင့်လည်း‌ကောင်း အလည်သွားနိုင်ပြီး Afsluitdijk ပေါ်ကိုဖြတ်၍လည်း လမ်းလျောက်နိုင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ Afsluitdijk ကို ဖြတ်ပြီး လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ဂေဟစနစ် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သော နည်းပညာသုံး ပရောဂျက်တစ်ခုသည်အကြောင်းအရာ အသစ်များကို ရှာဖွေခြင်း၊ အတွေ့အကြုံသစ်များ ရရှိခြင်း ၊ ပညာရခြင်း၊ ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း၊ လူထုအခြေပြု အသိပညာရှာဖွေခြင်း၊ အပန်းဖြေခြင်းနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အားလုံးသည် ရေနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော အကြောင်းအရာများပင် ဖြစ်တော့သည်။
Happy Fish ဟုခေါ်သောMona-Lisa ကဲ့သို့အပြုံးရှိသည့် ငါးများလည်းရှိပါသေးသည်။ သူတို့သည် ငါးများကူးပြောင်း သွားလာရေးအတွက် အန္တရာယ်ကင်းသော လမ်းကြောင်းများကို ရေအောက်ကမ္ဘာ အနှံ့သတင်းလိုက်‌‌ပေးသည့် ငါးအမျိုးအစားများ ဖြစ်ကြသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် မြစ်အတွင်းတွင် ငါးများရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်သော ဗဟုသုတ ပိုမိုစုဆောင်းရန် အတွက် "သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် သုတေသနစင်တာ" တစ်ခု မြစ်အတွင်းတွင် တည်ဆောက်ရန် စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်ကို‌နောက်ဆုံးထား၍ Afsluitdijk ၏ အဓိကခရီးသွားများကို အကြီးအကျယ် ဆွဲဆောင်မည့် ပရောဂျက်ကို ဖွင့်လှစ်သွားရန်ရှိသည်။
ပုဂ္ဂလိက အကျိုးစီးပွားများကို နောက်ချန်ထား၍ (Transcending self-interest)
Berkhuysen က စီမံကိန်း၏ အကျိုးစီးပွားသည် အာဏာပိုင်များ၊ အင်ဂျင်နီယာအေဂျင်စီများ၊ တံငါသည်များနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းသူများ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အဓိကမူတည်သည်ဟု တွေးထားသည်။ "ပါတီအသီးသီးသည် ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားများကို နောက်ချန်ထား၍ အားလုံးတူတူပေါင်းစည်းကာ ရေစီမံခန့်ခွဲမှုကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူသားနှင့်စီးပွားရေးတို့ဖြင့် ဆက်စပ်မှုရှိစေရန် အားထုတ်ခဲ့သည်။ ငါးများလွတ်လပ်စွာ ရေကူးနိုင်ရေးသည် အားလုံး၏ ဦးတည်ချက်ဖြစ်သည်။ ငါးများ ကူးသန်းသွားလာနိုင်ရန် တည်ဆောက်ထားသော Fish migrant မြစ်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် Afsluitdijk ၏ ဒီဇိုင်းပညာရှင်ဖြစ်‌သော Cornelis Lely ၏ ဆောင်ပုဒ်နှင့် အလွန်ကိုက်ညီသည် - "အဓိပ္ပာယ်ရှိစွာ ရှင်သန်နေ‌သော လူသည် ၎င်း၏အနာဂတ်ကိုဂရုစိုက်သည်။" ဟူ၍ဖြစ်သည်။
လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက အခြေခံအယူအဆ တစ်ခုလုံးနှင့်တကွ ပြဿနာကို တင်ပြပြီးနောက် Frsyslan ပြည်နယ်သည် စိန်ခေါ်ချက်ကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ အခြားအာဏာပိုင်များ၊ စီးပွားရေး လောကသားများ နှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ အခြေခံအယူအဆကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့် ဒီဇိုင်းဖြစ်အောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးမျိုးသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖြတ်သန်းကာ ရန်ပုံငွေနှင့် ပတ်သက်၍ စီစဉ်မှုများကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် FMR (Fish Migration River) အား တင်ဒါခေါ်ယူရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။ Fryslân ပြည်နယ်၏ ကိုယ်စားလှယ် Johannes Kramer သည် စီမံကိန်းအပေါ် အကောင်းမြင်သည်။ "Afsluitdijk သည် ပင်လယ်ရေနှင့် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ ၆၀၀၀ ကီလိုမီတာကို ၂၀၀၀ ကီလိုမီတာရှိသော အထက်ပိုင်းရေချိုဧရိယာမှ ဥရောပသို့ ခွဲထုတ်ထားပါသည်။ ပြည်နယ်ငယ် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်သကဲ့သို့ ဤအဓိကရေပေးစနစ် နှစ်ခုကို တစ်ဖန် ပြန်လည် ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် အတွက်ကျွန်ုပ်ဂုဏ်ယူပါသည်" ဟု ပြောခဲ့သည်။
Jan Rotgans သည် အနာဂတ်သစ်တစ်ခုတွင် လုပ်ကိုင်သော ငါးဖမ်းသမားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဟိုးယခင် ငါးရှဉ့်များကို ဖမ်းနေသည့် အချိန်၌ပင် သူသည် သဘာဝပြောင်းလဲမှုကို တွေ့မြင်ခဲ့သည်။" ဒီရက်ပိုင်း‌တွေမှာ ငါးရှဉ့်အစား Wadden ပင်လယ်ထဲမှာ ပစိဖိတ်ကမာတွေ၊ အခွံပျော့ Clam တွေ၊ ပိုတွေ့နေရပါတယ်" ဟု သူကပြောသည်။ ငါးရှဉ့်ဖမ်းမိမှု ကျဆင်းလာသည့်အခါ Rotgans က ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက် လှေခရီးများ စီစဉ်ပြေးဆွဲပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် FMR၏ အကျိုးဆက်ကြောင့် ငါးရှဉ့်ဖမ်းမိနှုန်း ပြန်လည်တိုးတက်လာလိမ့်မည် ဟု Totgans ကယုံကြည်လျက် ရှိကာ ငါးစားကျက်များ ငှားရမ်းရန်အတွက် စာချုပ်များကို အမြဲတမ်း ဆက်လက်သက်တမ်းတိုး ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
အခြားမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများအတွက် လှုံ့ဆော်မှု အရင်းအမြစ်တစ်ခု
ကမ္ဘာ့အခြားနေရာများတွင် ဆားငန်ရေ နှင့် ရေချိုတို့ဆုံတွေ့သည့် နေရာများကို ပြန်လည် ထူထောင်ရန် တောင်းဆိုခြင်းများ ရှိပါသော်လည်း ယခု FMR ကဲ့သို့‌သော ပရောဂျက်များ မရှိသေးပါ။ FMR နှင့် အခြားရေချို-‌ရေငန် အသွင်ကူးပြောင်းမှု ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း အားဖြင့် ဒတ်ခ်ျဟိုက်ဒရောလစ် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းသည် ပြောင်းရွှေ့သွားလာသော ငါးများ၏ ဂေဟစနစ်ကို တိုးတက်စေ‌ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့‌ရေးတို့ နှင့် စပ်လျဉ်းသော တမူထူးခြားသည့် ဗဟုသုတနှင့် အတွေ့အကြုံများကို ရရှိခဲ့သည်။
မျိုးစိတ်များစွာသည် အခြေအနေ ဆိုးရွားလျက်ရှိနေသောကြောင့် ယခုဖြစ်စဉ်သည် အရေးပေါ်ကိစ္စ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ အလွန်အကျွံ ငါးဖမ်းခြင်း နှင့် ဆည်တာတမံအတားအဆီးများစွာ တို့သည် ဂေဟစနစ်၏ ဟန်ချက်အား ယိုင်နဲ့စေလျက် ငါးအထွက်နှုန်းများ ကျဆင်း‌‌စေခြင်းကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့မှုကို ထိခိုက်စေသည်။ ကုလသမဂ္ဂမှ သုတေသီများက ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကိစ္စကို ယခုအရေးမယူလျှင် ၂၀၅၀ တွင် သမုဒ္ဒရာမှ ငါးအားလုံး ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်ဟု အရေးပေါ် သတိပေးနေကြသည်။
တစ်စုံတစ်ခု ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်ကို နိုင်ငံများက ပိုပြီးသဘောပေါက်လာသည်။ Afsluitdijk ရှိ ငါးရွှေ့ပြောင်းမြစ်သည် ကုန်းတွင်းရှိ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများ ၏ ဂေဟစနစ်များကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန် အတွက် ဖြေရှင်းသည့် နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စ၏ အရေးတကြီး လိုအပ်ချက် အရ နိုင်ငံခြား ကိုယ်စားလှယ်များသည် နယ်သာလန်၏ Afsluitdijk ကဲ့သို့‌သော သဘာဝနှင့် အံဝင်ခွင်ကျ သဟဇာတဖြစ်သည့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများ ထူထောင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို လေ့လာသင်ယူရန်‌ ရောက်လာကြသည်။ Kramer က "တီထွင်ဆန်းသစ်သော FMR သည် နယ်သာလန်ကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်နေရာထက်မကသော အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်စေသည် "ဟုဆိုသည်။
" ရေသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပါဝင်နေသော စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ "
နယ်သာလန်၏ ပထမဆုံး ရေကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ခဲ့သော Henk Ovink က သူတာဝန်‌ထမ်းဆောင်နေစဉ် အချိန်အတွင်း တီထွင် ဆန်းသစ်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့စေရေးတို့ ရရှိစေရေးအတွက်ရေနှင့် ပတ်သက်၍ နိုးကြားသိမြင် စိတ်တိုးတက်စေရေး၊ ရေနှင့်ညွန့်ပေါင်း ပရောဂျက် အကြီးအသေးမဆို အားလုံးနှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာ တိုးတက်စေရေးတို့ကို အားပေးလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
သူက ဒတ်ခ်ျတို့၏ ဗဟုသုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံသည် ထူးခြားပြီး မရှိမဖြစ် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် FMR တွင် ထိုအချက်များ အားလုံးနှင့် ပြည့်စုံသည်ဟု‌ တွေးသည်။ ရေသည် ကမ္ဘာအနှံ့ ဆက်သွယ်နေသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရေရှားပါးမှု၊ ရေဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ ရေအရည်အသွေး၊ ထောက်ပံ့ ပို့ဆောင်ရေး နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏အားလုံးပါဝင်သော ပြီးပြည့်စုံသည့် ချဉ်းကပ်မှုဖြင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ကွဲပြားသော လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်လျက် ရှိတော့သည်။
"FMR နှင့်အတူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရေနှင့် အတူတကွ နေထိုင်တဲ့ အစဉ်အလာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ရှုထောင့်မှ ရေ‌အောက် နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သက်ရှိများ၏ ဘဝအရည်အသွေးကို လုံခြုံမှု ပေးလျက်ရှိသည်။ ရေကာတာတစ်ခု ဆောက်ပြီးနောက် ဘေးတွင်အပေါက်တစ်ပေါက် ဖောက်၍ "ဘေးကင်းလုံခြုံရေး နှင့်အရည်အသွေး" အတွက် အပြန်အလှန်မျှ‌ခြေကို ရှာတွေ့နိုင်ပါပြီ။ ဒီဒတ်ခ်ျ ဗဟုသုတနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုသည် ထူးခြားသည်။ ၎င်းကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွင် အသုံးပြုရန် အခွင့်အလမ်းများစွာ တွေ့မြင်နိုင်သည်။"
Fish Migration River, Afsluitdijk:
အရှည်။ ။4ကီလိုမီတာ
ငါးအရေအတွက်။ ။ သန်းရာပေါင်းများစွာ
IJsselmeer ၏ဧရိယာ။ ။ 1,100 km²
Wadden ပင်လယ်၏မျက်နှာပြင်ဧရိယာ။ ။ ca. 10,000 km²
စကေး။ ။ ca. 55 ဟက်တာ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု။ ။ ယူရို ၅၅ သန်း
De Nieuwe Afsluitdijk (The New Afsluitdijk) သည် Noord-Holland နှင့် Fryslân ပြည်နယ်များနှင့် Hollands Kroon၊ Southwest-Fryslân နှင့် Harlingen တို့၏ မြူနီစီပယ်များ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဖြစ်သည်။
FMR ကို အစပျိုးသူများ။ ။
Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, netVISwerk နှင့် Het Blauwe Hart ။
ပိုမိုသတင်းရယူရန်။ ။ www.vismigratierivier.nl
FMR မှ မည်သူက အကျိုးအမြတ်အများဆုံး ရရှိမည်နည်း။
FMRမှ အကျိုးများစွာ ရရှိမည့်ငါးများမှာ ဆော်လမွန်၊ sea lamprey နှင့် ငါးရှဉ့် တို့ဖြစ်ကြသည်။ ယခင်က ထောင်သောင်းချီသော ဆော်လမွန်များသည် Zuiderzee (ဆည်မဆောက်မီက IJsselmeer ကိုခေါ်သောနာမည်)သို့ ရေကူးသွားနေ‌ကျ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယခုတွင်မူ ရှားပါးနေပြီဖြစ်သည်။ ဆော်လမွန်များသည် မျိုးဥချရန်အတွက် မြစ်များမှတစ်ဆင့် ဂျာမနီ နှင့်ဆွစ်ဇာလန်သို့ ကူး‌နေရပြီဖြစ်သည်။ နွေဦးရာသီ၌ sea lamprey များသည် IJsselmeer သို့ဝင်ပြီး Southern Limberg နှင့် Germany ရှိ အသေးငယ်ဆုံး မြစ်များသို့ ကူးသွားပြီး မျိုးပွားကြသည်။ ထို့နောက် သားပေါက်များသည် ပင်လယ်၌ ကြီးထွားရန်အတွက် မြစ်အောက်ပိုင်းမှတစ်ဆင့် သွားကြသည်။ ဥရောပငါးရှဉ့်များသည် ကာရေဘီယံအရှေ့ဘက် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတွင် တည်ရှိသည့် Sargasso ပင်လယ်၌‌ မွေးဖွားလေ့ရှိကြသည်။ သားလောင်းများသည် ပင်လယ်ကွေ့‌ ရေစီးကြောင်း နှင့်အတူ သူတို့၏နေရင်းဒေသများဖြစ်သော Wadden ပင်လယ်ကဲ့သို့ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများဆီ မျောပါသွား‌‌လေ့ရှိသည်။ ထိုနေရာများတွင် သူတို့သည် မျိုးဥချရန်အတွက် ကီလိုမီတာ ၆၀၀၀ ခန့်ကို ခရီးမစတင်မှီ အထိ အနှစ် ၂၀ ခန့်နေထိုင်ကြသည်။
Original Blog Source: https://next.blue/articles/rising-sea-levels-in-the-netherlands-they-are-digging-a-hole-in-a-dike
News Editorials Burmese Articles Water Themes River & Inland Waters
Water Resource Management Ecosystem Services
သဘာဝချိန်ခါ - Time for Nature
Wednesday, 12 January 2022 International Guidelines on Natural and Nature-Based Features for Flood Risk Management
Monday, 10 January 2022 Online Course: Change in water-use efficiency over time
Friday, 07 January 2022 The disappearing glaciers of the Himalayas
Monday, 03 January 2022 What are the impacts of dams on the Mekong river?
Monday, 27 December 2021 Water Tech Spotlight: the latest technology developments in the water industry | December 2021
Thursday, 23 December 2021 ရေနှင့်သက်ဆိုင်​သော ​နောက်ဆုံး​ပေါ် နည်းပညာများနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ